Umkhiqizi wenkinobho yensimbi uyazi inkinobho yenkinobho yensimbi
Njengomunye wamadivayisi wezimboni ovame kakhulu, inkinobho yensimbi isetshenziswe kabanzi eChina. Abanye abantu kungenzeka abazi okuningi ngokushintshwa kwezinkinobho zensimbi, futhi ulwazi lwezinkinobho zensimbi luzosisiza ukuxhumana nezinkinobho zensimbi ngokuzayo. Kuyini inkinobho yezinsimbi? Inkinobho yensimbi switch pu ...
Incazelo yokufakwa kwama-terminals emabhokisini amathuluzi
Ngokuthuthuka kwamandla kagesi, ibanga lokusetshenziswa kwetheminali liyakhula unyaka nonyaka, futhi kunezinhlobo ezanda ngokwengeziwe zemigqa yokugcina kudeshibhodi yensimbi, ikhabethe ne-terminal. Ukuqinisekisa ukuphepha kukagesi, irowu yesiginali isetshenziswa kabanzi futhi kufanele ikhokhe ngaphezulu ...
I-TOP 10 BEST LED DIMMER SHINTSHA 2020
1.I-Smart Dimmer switch, i-Neutral Wire iyadingeka, iTranslife WiFi Light switch ye-Dimmable LED, i-Halogen Smart remote control: lawula ukukhanyisa kwendlu yakho ngohlelo lokusebenza ku-smartphone noma kuthebhulethi yakho ukusuka noma ikuphi, nganoma isiphi isikhathi; ilungele uma ungekho ekhaya noma lapho uhleli kusofa yakho ethokomele ...